Fiteny Tompotany Nepali Iray Manokatra ny Pejim-Panantenana Noho ny Fivoahan’ny Rakibolana Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Roa monja anefa no mailaka amin'ny fitenenana izany fiteny izany
Voadika ny 16 Aogositra 2017 6:01 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, Français, Español, नेपाली, ਪੰਜਾਬੀ, 繁體中文, 日本語, English
Gyani Maiya Sen no iray amin'ireo haingam-piteny Kusunda anankiroa. Pika avy amin'ny lahatsarin'i Felix Gaedtke.
Nisy boky iray vao nivoaka miendrika rakibolan'ny teny Kusunda, iray amin'ireo fiteny maro tandindonin-doza ao Nepal, no nahavotra ity fiteny ity tsy ho faty mangina. Mbola mampisaritaka ireo mpandalina fiteny maro hatramin'izao ny fiavoan'ity fiteny mitoka-monina, izay tsy manana fifandraisana miharihary na dia amin'ny fiteny iray hafa eto amin'izao tontolo izao aza.
Dimy taona no niezahana handrafetana ny rakibolana Kusunda
Na dia nasehon'ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2011 aza fa 273 ny isan'ny mponina Kusunda ao Nepal ary 28 ny isan'ny olona manana ny Kusunda ho tenin-drazany, ny saham-pikarohana no manolo-kevitra fa 150 ihany no isan'ny Kusunda ary roa ihany no isan'ny olona malama vava amin'io fiteny io.
Fiteny ifandovana an-tsofina tsy voavadika ho soratra ny Kusunda ary tsy misy ny rakitra, tahirin-kevitra na boky vonona ho amin'izany fiteny izany. Mieli-patrana manerana ny firenena ireo Kusunda mbola velona ary tsy manana fotoana azo araraotina ifampiresahana amin'ity fitenin-drazan-dry zareo ity ry zareo. Tsy maintsy mitelina ny fomba fiainana sy ny fomban-kolontsaina any amin'izay toerana onenan-dry zareo ry zareo. Vokatr'izany dia tsy miteny amin'ny fitenin-drazana ny Kusunda na dia ao an-tranony aza.
Araka an'i Uday Raj Aale, mpanoratra ny boky, ireo roa sisa velona mailaka amin'ilay fiteny dia ry Gyani Maiya Sen Kusunda, 81 taona, avy ao Deukhuri, Dang sy i Kamala Sen Khatri, 48 taona, avy ao Rolpa. Amin”izao fotoana izao ny Kusundas dia monina ao amin'ny distrikan'i Kapilvastu, Arghakhanchi, Pyuthan, Rolpa, Dang ary Surkhet ao Nepal.
Ny fonomboky miresaka ny Kusundas. Nahazoana alalana.
Ny Kusundas, fantatra ho Ban Raja (mpanjakan'ny ala), dia nanana fomba fiaina mirenireny mihaza sy mioty any amin'ny alan-tendrombohitra afovoany sy ny somary andrefana kely ao Nepal vao taompolo vitsy monja izay. Ny fomba fiainany, ny endri-trano ankapobeny ary ny fiteny miavaka sy tsy manam-paharoa Kusunda no ahafahana maminavina fa efa hatry ny fahagola ry zareo no nonina tao Nepal.
Na ry Kusundas aza dia manondro ny tenan-dry zareo ho ‘mpanjakan'ny ala’, izay lazaina amin'ny fiteny Kusunda hoe Gilangdei Myahak ary mitaky sata mitovy sy fifandraisana amin'ny Thakuris, foko mpitondra ao Nepal. Araka ny Kusundas, ny Thakuris no mpanjakan'ny tany voavoly, raha manana ny fanjakany amin'ny tany rakotra hazo kosa ry zareo. Ny Kusundas dia nahazo anaram-bositra Thakuri toy ny Shahi, Sen ary Khan.
Ny bokin'i Aaley dia miresaka momba ny tantara, ny fiteny, ny kolontsaina ary ny fomban-drazana Kusundas ary nahazoana rakiteny mihoatra ny 2500 ao amin'ny fiteny Kusunda. Na izany aza dia tsy i Aaley irery no olona mandalina ny Kusundas. Niasa hampitodika ho amin'ity fiteny feno misitery ity ihany koa ry Brian Houghton Hodgson, Johan Reinhard, David Watters, B.K. Rana ary ry Madhav Prasad Pokharel ankoatra ireo mpampianatra mpikaroka hafa.
Ity lahatsary nataon'i Felix Gaedtke sy i Gayatri Parameswaran ity dia manasongadina ny antsafa nifanaovana tamin'i Gyani Maiya Sen, zanany lahy sady profesora Pokharel avy ao amin'ny departemanta foiben'ny haifiteny ao amin'ny oniversiten'i Tribhuvan.
Nitondra vaovao tsara ho an'ny Kusundas ny fifidianana ifotony tamin'ity taona ity. Voafantina ho solontena ao amin'ny komitim-pitantanana ao amin'ny monisipaliten'i Ghorahi, tanàna fahafito lehibe indrindra ao Nepal, ao anatin'ireo sokajin'ny vondrom-piarahamonina lasa anjorony i Dhan Bahadur Kusunda, mpanangana ny Fikambanam-Pampandrosoana Kusunda ao Nepal.
Raha mbola miatrika ny mety hahafongotra azy ny fiteny Kusunda, ny fisian'ny Kusundas any amin'ireo fiadidiana ifotony sy ny ezaka hanambàrana rakibolana Kusunda no hahafahana mitahiry ny kolontsaina sy ny fomban-drazana ary ny fiteny Kusunda tenany.